Home News Madaxweyne Miyad Dhex Hurdeysa Wasaarada Gaashandhiga? Werarka Golaha Sharci Jadinta miyadan Maqal
Madaxweyne Miyad Dhex Hurdeysa Wasaarada Gaashandhiga? Werarka Golaha Sharci Jadinta miyadan Maqal
Iyado Xukumada Somaaliya ay qalqal galineyso Xildhibanada Iyo Gudoonkoda oo ay doneyso in ay burburiso aya waxa arintaani ay tahay mid fool xumo ah iyado kooxda qiyaano qaran durba ay u muqda kuwa fashilmiya.
Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka BFS ayaa Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ugu baaqay inuu si deg deg ah ku soo fara geliyo khilaafka u dhaxeeya Xukuumada iyo Madaxweynaha.
Xildhibaanada ayaa waxa ay sheegeen in Madaxweynaha aan looga baahneyn mar walba oo ay wax dhacaan inuu ka aamuso balse looga baahan yahay inuu cadeeyo go’aankiisa ku aadan arrintan.
Xildhibaanada ayaa si cad u sheegay in xukuumada Soomaaliya ay weerar toos ah ku soo qaaday Baarlamaanka hadii uu madaxweynaha ka aamusana ay u aqoonsanaya mid raali ka ah weerarka baarlamaanka lagu soo qaaday sida ay sheegeen.
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa xiliyada xiisadaha siyasaded ay tagan yihin ku mashquula adida xarunta wasaarada gaashandhiga isago oo iska oo ay u muqato mid gabood falada xukuumada uu qeyb uu ka yahay.